Nhau - Maitiro Ekuchengetedza Hydraulic Cylinder
Sei Kuchengetedza Hydraulic Cylinder
Ita basa rakanaka mukuchenesa, unoda kuita basa rakanaka pane yekuchengetedza iyo hydraulic cylinder, saka inofanira kuita basa rakanaka rekuchenesa. Ichi chinhu chakakosha kwazvo, iyo hydraulic cylinder mukushandisa kwenguva yakareba inozoburitsa guruva rakawanda uye makwapa, kana ikasacheneswa munguva, zvinokanganisa mashandisirwo echigadzirwa, saka tinofanira kuita basa rakanaka pakuchenesa michina mushure mekuishandisa mazuva ese, inova zvakare yakanaka nzira yekuchengetedza yemidziyo iyi.
Kutanga, iyo hydraulic mafuta inofanirwa kuchinjwa nguva dzose uye firita skrini yeiyo system inofanirwa kucheneswa kuve nechokwadi chekuchena uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
Chechipiri, iyo humburumbira yemafuta mukushandisa kwega kwega, kuita zvizere kuwedzeredza uye kudzvinyirira kweiyo bvunzo kumhanya kwemashanu kurova, uyezve kumhanya nemutoro. Sei? Nenzira iyi, mweya uri muchirongwa unogona kupera, uye masisitimu anogona kufemerwa. Kuvapo kwemhepo kana mvura muhurongwa kunogona kudzivisa zvinobudirira kuitika kwekuputika kwegesi (kana kupisa) mu cylinder block, inozokuvadza chisimbiso uye kukonzeresa mukati mekudonha kwesirinda yemafuta.
Chechitatu, iyo tembiricha tembiricha inofanirwa kudzorwa zvakanaka. Kana tembiricha yemafuta yakanyanyisa, hupenyu hwebasa hwechisimbiso hunoderedzwa. Kana iwo tembiricha yemafuta yakanyanyisa kukwirira kwenguva yakareba, chisimbiso chinenge chakaremara zvachose kana kutoshaya basa zvachose.
Chechina, chengetedza nzvimbo yekunze yepisitoni tsvimbo kudzivirira kukanganisa kwechisimbiso nekurovera nekukwaya. Chenesa iringi yeguruva rechisimba chine simba cheyirinda yemafuta uye sediment pane yakatarwa pisitoni tsvimbo, kuitira kudzivirira ivhu riri pamusoro petsvimbo yepiston kupinda muchirinda chemafuta uye nekukuvadza iyo pisitoni, humburumbira kana chisimbiso.
Chechishanu, tarisa shinda, bhaudhi uye zvimwe zvinobatanidza zvikamu kazhinji, uye wozvisungirira nekukasira kana zvakasununguka.
Chechitanhatu, kazhinji girisa zvikamu zvekubatanidza kudzivirira ngura kana kupfeka zvisina kujairika munzvimbo isina mafuta.